Njirimara ndu maka beginners na Forex trading – FX-Consultant
Ajụjụ na Azịza – trading
Trade na Financial Markets
Njirimara ndu maka beginners na Forex trading
E nwere ọtụtụ akwụkwọ maka beginners na-enweghị ike na-ọ bụla obi ike na ihe ịga nke ọma na Forex trading. The akwụkwọ na-Ego Trading dummies - by Mark Gallant na Brian Dolan, Day Trading na ịkụ Trading na Ego Market: Nka na ụzụ na isi Strategies ka uru site Market-akpali - by Lien, The Complete Turtle Trader - by Covel, The FX buut mara ụlọikwuu Guide to Strategic na kenkwucha Forex Trading - by Wayne McDonell . Lee otu onye mbido nwere ike ịchọpụta ya chọrọ azịza nke ajụjụ ya. The mbido nwere ike ịmatakwu banyere Forex trading gịnị ka ọ bụ? Olee otú ọ na-arụ ọrụ? Esi nwee ihe ịga nke ọma ahia? N'ezie ebe a tụlere atọ n'elu elu gosiri akwụkwọ maka Forex trading.
Self ọmụmụ akwụkwọ nke Forex trading
Nke a bụ otu n'ime ndị kasị na-ewu ewu akwụkwọ maka onwe-amụ mbido onye chọrọ ịga nke ọma n'ihi ya trading. Tumadi ọ na-ekpuchi ndị kacha mkpa isi nke Forex trading na teknuzu analysis of imeziwanye larịị. Ọtụtụ akwụkwọ ndị ọzọ dị banyere Forex trading ma akwụkwọ ndị a na-enye pụrụ iche ihe ọmụma ndị ahịa.
Day trading & na trading ego na Market
Kasị welcome maka beginners na Forex trading mbụ akwụkwọ e dere site na Kathy Lien. Nke a bụ obere akwụkwọ ma ọ bụ nnọọ aka maka mbido. Ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ ịmatakwu banyere ihe ndị Forex trading ọ / ọ ga na-anakọta akwụkwọ ime ka akwụkwọ na-ukwuu gaghị agara inye ịga nke ọma. The ọrụ nwere ike na-atụkwasị obi banyere akwụkwọ a.
The Forex trading na-achọ iri dị mkpa
The akwụkwọ iri oké mkpa nke Forex trading bụ akpali nnọọ mmasị n'akwụkwọ maka Forex ahịa ndị na-ukwuu chọrọ ịga nke ọma na ya onwe ya chọrọ. Nke a akwụkwọ e dere site na onye ọzọ dere Jared F. Martinez nke bụ otu n'ime ndị kasị ukwuu ọkachamara na Forex trading ụwa. Ọ bụkwa a so psychological njirimara trading, akwụkwọ a nwere a nhọrọ onye ọrụ nwere ike tinye ya / ya echiche banyere Forex trading ịga nke ọma.
Seven Strategies nke na-emeri na Forex trading
Nke a akwụkwọ na nkenke na-akọwa banyere otú iji melite ọrụ ịgbanwe na Forex trading. Ọ na-afọ ju trading echiche na echiche nke dị oké mkpa maka onye ọ bụla na-agụnye na Forex trading. Nke a akwụkwọ e dere site na ya bụ Grace Cheng, a ahia na-arụ ọrụ na zuru oge analysis of Forex trading nwekwara a na-achị onwe ahia.
Ọ bụrụ na ị nwere ike ghara inwe gị chọrọ azịza n'aka akwụkwọ a ị nwere ike ọzọ chọọ na Forex trading na kụrụ na akwụkwọ nke Forex trading na njikọ. Ọ dị mma. Ọ bụrụ na gị akwụkwọ na-amasị nke Forex trading na-adịghị depụtara ebe a. Mgbe ahụ ị pụrụ kpọtụrụ na anyị na-akwado. M na-eche ma ọ bụrụ na ị ọzọ nyochaa akwụkwọ a, ị ga-enwe ike ịchọpụta gị azịza. N'aka nke ọzọ ma ọ bụrụ na ị chọpụta na ọkacha mmasị gị Forex trading akwụkwọ ị pụrụ ịga nke ọma na gị onwe gị na Forex trading. Ọ na-ukwuu jara mma na m nwere ike obi sie gị na Forex trading ịga nke ọma.
Previous Post:Dị iche iche nke ọnụọgụ abụọ Nhọrọ
Dị iche iche nke ọnụọgụ abụọ Nhọrọ